Roman Pashkov kusukela "degree" a umsebenzi wakho wokucula uwedwa
Ngokushesha ukuze pop Olympus gang of "Degrees". Roman Pashkov futhi Ruslan Tagiyev waba "Breakthrough Yonyaka" ngo-2010 (Muz-TV). Ngemva kokufunda iminyaka embalwa, iphrojekthi yaphela nge ekhonsathini enkulu eMoscow ngo-April. Ngamunye walabafana baya ehlukile. Pa-Shock - entsha i-alias sihloko protagonist. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi abalandeli engaphelelwa yithemba?
Ehlobo lika-2016 kwamenyezelwa ukuthi Yana Rudkovskaya usayine inkontileka ne abaculi ukukhuthaza umsebenzi wabo. isimo esisodwa - imvuselelo ahlanganyelwe, akazange ayeke ukusebenza bukhoma hits ubudala. Ngo asebenzayo albhamu abo amabili studio: "Umuzwa lobubhalo", esilotshwe 2014, futhi "Naked" (2011), okuyinto baletha udumo okukhulu.
Isifiso ukuthola umkhiqizi omusha waseRoma wabe Pashkov obonakaliswe Februwari, kodwa akekho owacabanga ukuthi kuyoba Rudkovsky. Ngaphansi inkontileka, ingxenye zomculo yephrojekthi kwaba ukubandakanya Dima Bilan.
Ngawo lowo nyaka kwaba khona mini-albhamu ngomculo ezinhlanu. On ezimbili zalezi Ukugunda zisusiwe - "Valigulyay" futhi "Degrees 100". Esikhathini yokugcina ubuhanjelwe abangane abaculi, kuyinto abalandeli babo abaqotho: umculi Elena Temnikova, videobloger Sasha Spielberg kanye sibalo skater Adelina Sotnikova. Hhayi ngaphandle iqhaza kakhulu Yana Rudkovsky, uPolina gagarina nezintsha iqembu umkhiqizi zomculo - Dima Bilan. Ngesikhathi 2017-th ukuvakasha isheduli okukhulunywa ngaso, okubonisa ukuthi ukuvuselelwa "Degrees".
Roman Pashkov: Biography umculi
Njengoba ayezalelwe laseStavropol, Roman wazalwa ngo-September 18. Ngo-2017 kuzoba neminyaka engu-40. Into ebaluleke kunazo zonke ekuphileni kwabaningi abantu owahlangana naye usemusha yakhe. Ruslan Tagiyev wafunda abasemakilasini okufanayo, wahlangana ngesisekelo uthando rap. Ukuze unkosikazi zamanje Anna Tereshchenko kwaba uthando kuqala, ukuphila okuyinto united ngemva ngokwahlukana eside.
Inkuthalo cwaningo akazange ihluke kusukela ebuntwaneni asithandayo handball. Kanye amaqembu ezemidlalo eseke kuya disco, bese yasishintsha ukuphila kwakhe. Ngaphonsa ezemidlalo yaqala nokufunda ukudlala isiginci. Nganquma ukuxhumanisa ukuzibonakalisa kwabo ngomculo ngo ukubhalisa uMnyango oqondisa e-Institute futhi waqala umsebenzi wakhe ku esiteshini se-TV sendawo. Kwakuwuhambo ethandwa ehola uhlelo umculo. Konke kwashintsha lapho sikhungo waxoshwa ngoba emsebenzini.
Yaqala ukuphila kule intsha zomculo uthole-ndawonye, ubhala iculo zabo. Roman Pashkov - nombhali iningi hits, kwenziwa kamuva iqembu "Degrees". Iyaduma ezweni lakubo, Pashkov futhi Tahirov waya eMoscow, enethemba ngamunye umsebenzi wakhe solo.
Ekuqaleni, bobabili ukuphila kube nzima. Indlela yokuziphilisa Roma amthatha esakhiweni, lapho kahle okwakhiwa ngalo la mabhodi umsebenzi. Khona-ke ukuthengisa omakhalekhukhwini, parallel izinkampani umculo ukunikela ama-demo ka amarekhodi abo. Kodwa akekho abanesifiso impahla zomculo. Ukudlalwa amaqembu 'izinkumbi "," 10 izinyawo ". Konke kwashintsha lapho efulethini Tagirova Roman Pashkov ukubeka phambili umbono yokudala siqu pop iqembu layo. Ngemva kweminyaka engu-15 othandana naye guys ndawonye nezinyanga eziyisithupha ebhaliwe iculo-15, kamuva elaba isici esiphawula leli iqembu elisha. Kwangena guitarists Dmitry Fidel (Bakhtinov) kanye Arsen Beglyarov wesigubhu Viktor Golovanov. Bonke kusukela laseStavropol.
Ikhonsathi sokuqala senzeka ngoMeyi 2008. Yini othulwe izethameli emva ukubuyekeza kanzima "Degrees" yenqubo? Ingoma "Umqondisi", "Radio Imvula," "Tramp", "7:00". Kuyathakazelisa ukuthi inkulumo yakhe, abafana kwadingeka ukuqasha club ngokukhokha imali yabo. Kodwa kusukela ngo-2009, ukubambisana nabo liqala production centre "ABC PRO" futhi ingoma "Umqondisi" Ufika ku ukujikeleza iningi iziteshi zomsakazo. Ngo-2011, wanyathelisa albhamu yokuqala, futhi kubonakala, guys kukhona phezu impumelelo. Kungani, ngo-2013 abalandeli wezwa kwaqedwa phrojekthi?
Roman Pashkov uchaza ngesinqumo esifisweni yokwakha ama-career ngawodwa, okuyinto iphupho impilo yonke. Phakathi frontman akukho ukushayisana. Ngaphezu kwalokho, kule noveli iyona ibhapathizwa ngendodakazi yakhe Tagirova - Eva.
Yena ngokwakhe wajoyina izimpilo zabo countrywoman Anna Tereshchenko. Lapho laba bafana kokuya eMoscow, U-Anna wayengummemezeli 17. Abazali bami waphikelela wamcela ukuba wahlala laseStavropol futhi abafundile. Waba stylist, bathuthela e-New York kanye nokushada.
Ngemva kweminyaka engu-10, abathandi wangaphambili sawela kuwebhu ukuqonda wokuthi ukuzihlukanisa yiphutha. Ngemva komhlangano ngo-Moscow, wayesenquma ukuhamba e-United States. Baye wadlala lomshado zinesizotha futhi ngo-August 2015 ngowokuqala emkhayeni watala indvodzana, uDaniyeli.
Njengoba umlobi tematheksthi umculo, Pashkov wabhala hhayi kuphela "Degrees" waleli qembu. Ingoma "Ungesabi, mina nginawe", "uMsombuluko", "Ukuqabula isikhathi eside" kulotshwe kohlaka umsebenzi wakho wokucula uwedwa. Kodwa iningi abathandi umculo ofuna ukukuzwa imisebenzi yakhe eyenziwa ithimba othandekayo. Ngakho, iphrojekthi "Degrees" kuphela, abayophila.
A ihabhu - kuyini? Wendabuko Russian yomculo enezintambo zomculo zasendulo
Imininingwane mayelana nokuthi kungani Temnikova ushiye iqembu "Isiliva"
Kanjani ukuze ufunde ukudlala i-harmonica ekhaya
Abaqambi Polish nomculo izigaba yentuthuko
Wilhelm uRichard Wagner: A Biography. Richard Wagner nemisebenzi yakhe edumile
Yini okufanele ngiyicele abazali bami ngoSanta Claus ngoNyaka Omusha?
Wesibeletho osteochondrosis - yokuzijwayeza kanye nokwelashwa
Lapho iTunes ilondoloza eyisipele: search idatha egciniwe
American abadlali abasha: "Onamandla Morphin Amandla Rangers: Dino Khokhisa"
Kuyini "Kagocel"? Analogue zomuthi, izinzuzo zayo
Ukuhlaziywa kwembongo kaLermontov "Parus"